Mumps In Child - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒေါကျတာစု ဆေးခနျးတှငျ ယခုတလော ရာသီအကူးအပွောငျးလေးနှငျ့အတူ
ကိုယျပူဖြားနာသော ကလေးမြား အမြားဆုံးဖွဈနသေညျ
နှဦေးလညျး မရောကျတရောကျမို့ ဖုနျကထူ ပိုးမှားမြားလညျး ဖုနျနှငျ့အတူ
လရေူးသုနျသုနျထဲပါလာပွီး စာမေးပှဲပွီးလို့ အတိုးခဆြော့ကစားနသေော ကလေးတှေ
ကလေးဖြားပွီဆို မိဘမြားကလညျး စိုးရိမျမှုမြားစှာနှငျ့
“ဆရာမ သားသားကလေ အဖြားကွီးတာ ၂ရကျရှိပီ” အစခြီကာ မေးကွလေတေော့သညျ
“သားသား ပါးစပျဟလို့ရဘူး” သားထှေး တဈယောကျ သူ့ထုံးစံ အတိုငျး စကားတတျသမြှ
ပွောပွနသေညျ၊ အခွားကလေးမြားနှငျ့မတူ သားထှေးတဈယောကျ ဆေးခနျးလာပွီဆို သူမနကျက
ဘာစားပွီး၊ ဘာဆော့တယျက အစ ညနေ မမေကေ ဘယျလို ဆူတယျအဆုံး လုံးစပေ့တျစေ့ အကုနျပွော
“ဟုတျပါပီ သားရယျ” “ဆရာမကို ပါးစပျလေး ဟ ပွပါဦး “ဆရာမ သားသား နားကလဲနာတယျ”
“ဟုတျလား ပွပါဦး” တှပေ့ါပီ သားထှေးကို ဒုက်ခပေးနသေော တရားခံကို! နားရှကျနျောမှာ ယောငျကိုငျးနသေော
ပါးခြိတျကွီး! သားထှေးအမဘေကျ လှညျ့ပွီး ” မမေရေေ ခုကလေးက ပါးခြိတျယောငျ ပွီးဖြားတာ”
“ဟုတျလား ဆရာမ အိမျနားက လူတှကေ ပွညျတညျနာ ဖောကျလိုကျပါလား? ပွောနကွေလို့ ကြှနျမက ဆရာမဆီ အရငျပွကွညျ့မယျဆို ပွီးချေါလာတာ”
“မမေရေယျ ကွံကွီးစီရာ ဒါ ပါးကြိတျယောငျတာ ဗိုငျးရပျဈပိုးတဈမြိုးကွောငျ့ဖွဈတာ”
“လထေဲ က ဖုနျ၊အမှုနျလေးတှကေ တဈဆငျ့ အသကျရူရငျးနဲ့ပိုးဝငျသှားတာ မမေရေေ”
“ဗိုငျးရပျဈပိုးဖွဈတာကွောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ရောဂါမဝငျရငျ ပိုးသတျဆေးသောကျစရာမလိုဘူး၊
ကလေး ကိုယျခံအားနှငျ့တိုကျထုတျရုံနှငျ့ကောငျးသှားတတျတာမြိုး၊ ကလေးအပူခြိနျမတကျအောငျ အပူကဆြေး၊
တိုကျပွီး အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ ကြှေးမယျဆို ပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ:
ကွာမွငျ့ခြိနျက ၁ပတျလောကျ ဖွဈတတျပွီး အဓိက ဖြားနတေဲ့အခြိနျမှာ ရနှေငျ့ စှပျပွုတျလိုမြိုးကို မြားမြားတိုကျ
ဒေါက်တာစု ဆေးခန်းတွင် ယခုတလော ရာသီအကူးအပြောင်းလေးနှင့်အတူ
ကိုယ်ပူဖျားနာသော ကလေးများ အများဆုံးဖြစ်နေသည်
နွေဦးလည်း မရောက်တရောက်မို့ ဖုန်ကထူ ပိုးမွားများလည်း ဖုန်နှင့်အတူ
လေရူးသုန်သုန်ထဲပါလာပြီး စာမေးပွဲပြီးလို့ အတိုးချဆော့ကစားနေသော ကလေးတွေ
ကလေးဖျားပြီဆို မိဘများကလည်း စိုးရိမ်မှုများစွာနှင့်
“ဆရာမ သားသားကလေ အဖျားကြီးတာ ၂ရက်ရှိပီ” အစချီကာ မေးကြလေတော့သည်
“သားသား ပါးစပ်ဟလို့ရဘူး” သားထွေး တစ်ယောက် သူ့ထုံးစံ အတိုင်း စကားတတ်သမျှ
ပြောပြနေသည်၊ အခြားကလေးများနှင့်မတူ သားထွေးတစ်ယောက် ဆေးခန်းလာပြီဆို သူမနက်က
ဘာစားပြီး၊ ဘာဆော့တယ်က အစ ညနေ မေမေက ဘယ်လို ဆူတယ်အဆုံး လုံးစေ့ပတ်စေ့ အကုန်ပြော
“ဟုတ်ပါပီ သားရယ်” “ဆရာမကို ပါးစပ်လေး ဟ ပြပါဦး “ဆရာမ သားသား နားကလဲနာတယ်”
“ဟုတ်လား ပြပါဦး” တွေ့ပါပီ သားထွေးကို ဒုက္ခပေးနေသော တရားခံကို! နားရွက်နော်မှာ ယောင်ကိုင်းနေသော
ပါးချိတ်ကြီး! သားထွေးအမေဘက် လှည့်ပြီး ” မေမေရေ ခုကလေးက ပါးချိတ်ယောင် ပြီးဖျားတာ”
“ဟုတ်လား ဆရာမ အိမ်နားက လူတွေက ပြည်တည်နာ ဖောက်လိုက်ပါလား? ပြောနေကြလို့ ကျွန်မက ဆရာမဆီ အရင်ပြကြည့်မယ်ဆို ပြီးခေါ်လာတာ”
“မေမေရယ် ကြံကြီးစီရာ ဒါ ပါးကျိတ်ယောင်တာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ”
“လေထဲ က ဖုန်၊အမှုန်လေးတွေက တစ်ဆင့် အသက်ရူရင်းနဲ့ပိုးဝင်သွားတာ မေမေရေ”
“ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါမဝင်ရင် ပိုးသတ်ဆေးသောက်စရာမလိုဘူး၊
ကလေး ကိုယ်ခံအားနှင့်တိုက်ထုတ်ရုံနှင့်ကောင်းသွားတတ်တာမျိုး၊ ကလေးအပူချိန်မတက်အောင် အပူကျဆေး၊
တိုက်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝအောင် ကျွေးမယ်ဆို ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်:
ကြာမြင့်ချိန်က ၁ပတ်လောက် ဖြစ်တတ်ပြီး အဓိက ဖျားနေတဲ့အချိန်မှာ ရေနှင့် စွပ်ပြုတ်လိုမျိုးကို များများတိုက်